ဘန်ကောက်ရေကြီး မှု သတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဘန်ကောက်ရေကြီး မှု သတင်း
ဘန်ကောက်ရေကြီး မှု သတင်း
ဘန်ကောက်ရေကြီး မှု သတင်း (Updated)
အရပ် လေးမျက် နှာ ကနေ မနားတမ်း ဝင်လာ တဲ့ ရေ တွေ ကြောင့် ထိုင်း နိုင်ငံ မြို့တော် ဘန်
ကောက် ရဲ့၇ဝ ရာ ခိုင် နှုန်း ခန့်ဟာ ရေနစ်မြုပ် တဲ့ ဒဏ် ကို ခံ နေရတယ် လို့ဘန်ကောက် မြို ့
တော်ဝန် က ပြောပါတယ်။
ရေကြီးမှု ဟာ နောက်ထပ် သတင်း လေးပတ် ခန် ့ထိ ဆက် ရှိ နေမှာ ဖြစ်တယ် လို့လဲ ထိုင်းဝန်
ကြီးချုပ် ယင်လပ် ရှင်နာ ဝတ်ထရာ က ပြောပါတယ်။ ထိုင်း နိုင်ငံ မှာ ရေကြီးမှု တွေ ကြောင့် စီး
ပွားရေး လုပ်ငန်း တွေ ၊ စက်ရုံ ၊ အလုပ် ရုံ တွေ နဲ့ကျောင်း တွေ ပိတ်ထား ရပါတယ်။
နိုင်ငံ မြောက် ပိုင်း က ရေကြီး မှု ဖြစ်ပွား နေတဲ့ ဒေသ အချို ့မှာ တော့ ဝမ်းလျှော ရောဂါ အပါအဝင်
တခြား ရောဂါ ဘယ တွေ လည်း ဖြစ်ပွား နေတယ် လို့ဆို ပါတယ်။
ဒီ နေ့ရေကြီး မှု ဟာ ဘန်ကောက် ဒွန်မောင်း လေဆိပ် ထဲ ထိ ဝင်ရောက် လာ နေ ပြီး အချို့ရေ
လွှမ်း မို တဲ့ နေရာ တွေ မှာ လျှပ် စစ်မီး တွေ ုဖြတ်တောက် ထား တဲ့ အတွက် ဒေသ ခံ တွေ အခက်
အခဲ တွေ နဲ့ရင် ဆိုင် နေရ ပါတယ်။
ယနေ့ည ၈နာရီ နောက်ဆုံး သိရတဲ့ သတင်း တွေ အရ ဘန်ကောက် မြို့အရှေ့ဘက်က ပသုမ်ဌာ
နီ မှာ ရေမြင့် တက် လာမှု ကြောင့် အဲဒီက ဒေသ ခံ တစ် ချို့ကို ဘေး လွတ် ရာ ကို ပြောင်း ရွှေ ့ထား
freedomnewsgroup.com မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
ဘန်ကောက်မှာ၊ ပတူနမ် ညနေပျံကျ ဈေးဘက်မှာဆို အချို့နေရာတွေမှာရေတွေလျှံပြီးအမြဲ စိုစွတ် နေတာ၊ဆာဖာရီတို့၊ ကလေးကစားကွင်းတို့ဘက်ဆို စိမ့်တောတွေလိုပါပဲ၊ အဲဒီမှာ အဲသည် အကြောင်း က၊ လမ်းနှစ်ထပ်တွေဆောက်ရတဲ့အချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါတယ်၊ ဘန်ကောက်က ပင်လယ် ရေမျက်နှာ ပြင် အ ထက် ပေ (5)ပေပဲမြင့်တယ်လို့ကြားဖူးတယ်၊ရန်ကုန်က တော့ (15)ပေ လို့သိ ရတယ်၊ ကြိုတင် ပြင် ဆင် ဘို့တော့လိုပြီ၊ ရေကာတာတွေ၊ ဆောက်ခြင်းဟာအကျိုးကျေးဇူးရှိသလို၊ မိုးရေချိန်တစ်အားများပြီး၊ ပင်လယ် ရေမျက်နှာပြင်မြင့်လာရင်တော့၊ ရေကာတာတွေမကျိုးအောင်ဖေါက်ချရတဲ့အခါ၊ ရေကထွက် ပေါက်မ ရှိပဲ အခုလိုရေကြီးစေတာတွေသေချာပေါက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်၊သင်ခန်းစာယူစရာပါပဲ။
တော်တော်များများ ကပ်ဆိုက် နေတာပါပဲ
ထိုင်းဆို..၃ပုံ ၁ပုံ ရေတွေဖြစ်နေတယ် ပြောတယ်….တဖြည်းဖြည်းရေတက်လာတာ..
ဝန်ကြီးချုပ် အန်တီ ယင်လက်ခ် ဆိုလားပဲ..သူလဲ..တတ်နီုင်သလောက် လှုပ်ရှားနို်းဆော်..ရွှေ ့ပြောင်းပေးနေလေရဲ့
လယ်တွေ..စက်မှုဇုံတွေ ရေမြုပ်တော့..အလုပ်လက်မဲ့တွေဖြစ်..မြန်မာတွေလဲ အောင်ဖျာလိပ်ကြပြီပေါ့.
မြန်မာပြည်ပြန်လာသူတွေကို နယ်စပ်မှာ ငွေညှစ်နေတယ်လဲ ကြားတယ်..
ံ့ပုံထဲမှာ မိချောင်း ထမ်းလာတာ မြင်ရတော့.. အရေခွံ စုပ်ဖို့ မွေးထားတဲ့ မိချောင်း ရေထဲရောက်သွားလို့ ဖမ်းလာကြတာလား မသိဘူးနော်။
လူတွေက အရေခွံ မစုပ်ရပဲ သူတို့က လူတွေကို အရေခွံ စုပ်သွားအုန်းမယ်။
ရေတွေ ကြီးနေတာ ဆိုတော့ ခရီးသွားတွေ ဘယ်လိုနေလဲ မသိဘူး။
ဆုကြေးထုတ်ထာတယ်..မိကျောင်းတစ်ကောင် ဖမ်းပြီးလာအပ်ရင် တစ်ကောင်ဘတ် တစ်ထောင်.. တဲ့..။
ကြောက်စရာကြီးဘဲ။ ၂၀၁၂ နားနီးလာလို့ လားမသိဘူး။ပျက်စီးမှုတွေကပိုပိုပြီးကြီးလာတယ်။ မြန်မာပြည်သာအဲဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပြင်ဆင်မှာလဲ….
ပတိုနာမ်း ( pratunam ) ကတော့ ရေမဝင်သေးဘူးလို့ဆိုတာဘဲ
ပြဿနာက သူတို့ရွာက ရေတက်ရေကျကိုသိပ်တွက်မတတ်လို့ပါ
အပေါ်ကနေ လွှတ်ချလာတဲ့ရေတွေကတော့ အပြင်ကိုစီးထွက်နေတာဘဲ
26 ရက်နေ့က လကွယ် ရေထရက်
27 ရက်နေ့က ခေါင်ရေ ဆိုတော့ကာ
အဲ့သည် ပင်လယ်ရေ ကြီးတဲ့ရက်မှာ မိုးမရွာရင်တော့ ဘန်ကောက်တစ်မြို့လုံးတော့
ပင်လယ်ရေမြင့်နေလို့ ချောင်းရေက ထွက်မရရင် နည်းနည်းတိုင်နေမယ့်သဘောလောက်တော့ရှိမှာပါ
သီတင်းနှစ်ပတ်ကျော်နေပြီ ခုထိတော့ ရာနှုန်းပြည့်မကြီးသေးပါဘူး
ပြောလို့သာပြောတာ ကျုပ်ဘဝမှာ ရန်သူမျိုးငါးပါးဆိုတာ
ကျုပ်နေတဲ့ရပ်ကွက်မှာတော့ မြေကြီးကိုဖနောင့်နဲ့ပေါက်ပြီး ကျိန်းထားတယ်
တွေ့တယ်မလား လောလောဆယ် မိကျောင်းနှစ်ကောင်ပြန်သိမ်းလိုက်တာ
နောင်ဆိုရင် ကျုပ်သူ့ကို အိမ်မြောင်ဘဲပေးသနားတော့မယ်
ဒီတစ်လော မုန်တိုင်းသတင်းလည်းမကြားမိတော့ မိုးမရွာဘူးလားသိဘူး
ရွာတော့လည်း ဘာပူလို့ ကျုပ်နေတာ ဆယ့်ခြောက်ထပ်မှာ
လမ်းစရိတ်ကတော့ အရပ်ကူတယ်လူဝိုင်းတယ်ပေါ့ဗျာ သံရုံးကဘောပင်နဲ့ တံဆိပ်တုံးစိုက်တယ်
နယ်စပ်ရောက်ရင်တော့ နယ်စပ်ကနွားမသားတွေ ဘယ်လိုနှိပ်ဆက်ဦးမလဲမသိဘူး
ရေထဲလွှတ်နေတဲ့ အသားစား မိဂျောင်းကြီးတွေက ဂျော်နီ့ကို ကိုက်စားဖို့ ချောင်းနေကြတယ်။ သေရည်ဝနေတဲ့ ဂျော်လကီသား နုနုထွတ်ထွတ်လေးကို စားဖို့ မိဂျောင်းထီးကြီးတွေက သွားရေတများများနဲ့ဆိုပဲ။ သဂျီးညနေတိုင်း သုံးဆောင်နေဂျ ဘီယာတိုက်ထားတဲ့ ကိုဘေးနွားကင် အရသာကိုတောင် ပျင်းသေးသတဲ့..။။ ဂျော်လဂီအောင်ပုရေ အမျှ အမျှ….။
ဆြာပု နှယ့် ဘောက်မဲ့ကြောင့် ဦးရှင်ကြီး ဆွဲထည့်ရတာ တုန်း..
ခမျာ ပြောင်ပြောင့် ကောင်းမှုကြောင့် ရေဂါဒါ မဆောက်တော့ဘူးဆိုလို့
အပျော်လွန်ပီး ကိုကြီးကျော်နဲ့ အောင်ပွဲခံနေတုန်းရှိသေး …
ပခုက္ကူရေကြီး လို့ ဝိုင်း ကလော်ခံထိရတဲ့ကြားထဲ …ဘန်ဂေါက် ကပါ
စီးတော်ဂျောင်း က ၁ကောင်တည်း ဟုတ်ဝူးလားဗျ
နယ်စပ်က ယူနီဖောင်းစုတ်နဲ့ ဒန်းမသားတွေကတော့
ရသလောက် ဒုတ်ခရောက်ပြီး နေရပ်ပြန်သူတွေကို ညှစ်ဦးမှာပဲ..
ဥပမာ – အိမ်တစ်ခုရဲ့ မိသားစုတစ်ခုမှ အပြင်မှာ စီပွားရှာပြီး ဒုတ်ခသုတ်ခ ကိုယ်အိမ်
ကိုယ် ပြန်လာတဲ့ ညီအစ်ကိုတစ်ယောက်ကို ဓါးကိုင်စောင့်ပြီး ပိုက်ဆံပေးမှ ဒီအိမ်ဝင်ရမယ်ဆိုရင်
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိတဲ့ နယ်စပ်က နွားတွေကို ဒီအတိုင်း လွှတ်ထားတော့မှာလား..
ကိုယ်ချင်းမစာတဲ့ အဲနွားတွေကို ဖိနပ်ခွေးချီးသုတ်ပြီး သောက်ခွက်လှိမ့်ကန်ပလိုက်ဗျာ..
ဘန်ကောက် ရေကြီးတာ ထက်ပို ပြီး ထူးခြားတဲ့ သတင်းရှိသေးဗျာ။
MRTV , MRTV-4 နှင့် MWD တို့ က ထိုင်းမှာ ရေကြီးတာ မသိဘူးတဲ့ ဗျာ ပြော လိုက်ကြပါ အုံး။
good ပြောပုံ အရ ဆိုရင်
အဲဒီ ဌာန တွေ ကို “မန်းတလေးဂေဇက် မှာ နေ ့စဉ်လာဖတ်ပါ” လို ့